Papirus Icon Theme for Unity, Gnome, Pantheon, Cinnamon, XFCE ankoatry ny hafa | Avy amin'ny Linux
Fotoana lasa izay dia niresaka momba ny Papirus ao amin'ny Lisitr'ireo fampiharana sy fitaovana mahavariana ho an'ny Ubuntu / Linux, izay heveriko ho iray amin'ireo lohahevitra kisary tsara indrindra ho an'ny Ubuntu.
Ity lohahevitra kisary ity dia mifanaraka amin'ny Unity, Gnome, Pantheon, Cinnamon, XFCES ary ny sasany hafa, manana sary masina mihoatra ny 1000 ho an'ny fampiharana isan-karazany izy ity, karakaraina tsara sy miaraka amina endrika bika.
Ireo mpamorona azy dia ny ekipan'i Ekipan'ny fampandrosoana PapirusManana andiana lohahevitra, kisary ary fanaingoana ho an'ny fizarana GNU / Linux izy ireo, raha te hanome endrika vaovao ny fizaranao ianao dia mamporisika anao aho hanandrana ity fonosana ikona lehibe ity.
1 Ahoana ny fametrahana temotra Papirus Icon
1.1 Ampidiro amin'ny Archlinux, Manjaro, Antergos (AUR):
1.2 Mametraka amin'ny Ubuntu 14.04 / 16.04:
Ahoana ny fametrahana temotra Papirus Icon
Azonao atao ny mametraka ny Papirus Icon Theme ho an'ny ArchLinux na Ubuntus sy ny derivatives toy izao:
Ampidiro amin'ny Archlinux, Manjaro, Antergos (AUR):
Mametraka amin'ny Ubuntu 14.04 / 16.04:
Manantena aho fa ankafizinao ity fonosana kisary tsara ity ary nihatsara ny fisehon'ny biraonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Papirus Icon Theme for Unity, Gnome, Pantheon, Cinnamon, XFCE ankoatry ny hafa
Misaotra amin'ny tendrony .. foto-kevitra tena tsara amin'ireo sary masina .. (mety tsy misy idiran'izany fa miasa amin'ny openbox ihany koa)
Valio abraham tamayo
tena tsara, fametrahana.
Salama, vaovao amin'ny Linux aho ary mampiasa Linux MInt, ilaina ny milaza amin'ny fandefasana fa faly aho amin'ny fizarana sy ny estetika. Te-hanontany aho na dia toa miharihary aza, ahoana ny fomba fametrahana ny rindranasa aorian'ny fampiharana ny torolàlana ao amin'ny terminal, lazaiko izay ataoko aorian'io dingana io hahazoana izany.
Aorian'ny fanarahana ireo dingana lazaiko dia mandeha amin'ny endrika ivelany ianao ary amin'ny fizarana kisary dia misafidy ireo an'ny Papirus ianao ary avy eo manaiky.